» के हो बिहीबार मोरङको आकाशमा देखिएको सेतो डल्लो ?
के हो बिहीबार मोरङको आकाशमा देखिएको सेतो डल्लो ?
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०६:०५
बिहीबार मोरङ र सुनसरीबाट आकाशमा दिउँसै ताराजस्तो दृश्य देखिएको छ । आकाशमा हेर्दा उत्तर दिशातर्फ सजिलै देख्न सकिने त्यो दृश्य दिउँसो ३ बजेदेखि नै देखिएको हो । पहिला यस्तो बस्तु मोरङको सुनवर्शी तथा रंगेलीका स्थानीयले देखेर फोटोहरु सार्वजनिक गरेका थिए । सुनवर्शी नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुकुमारी राईले सीएफएल बल्बजस्तो चम्किलो बस्तु आकाशमा देखिएको बताउनुभयो । आकाशमा टलक्क टल्किएको बस्तु देखिएपछि सबैले अचम्म मान्दै तस्बिर खिचेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसबारेमा नेपाल नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी(नासो) का अध्यक्ष तथा अन्तरिक्ष तथा खगोल विज्ञानका ज्ञाता सुरेश भट्टराईसँग बुझ्दा उहाँले यो कुनै अर्थ अब्जर्भेसन र ट्राफिक माेनिटरिङ स्याटेलाइट भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो अमेरिकाले छाडेको अर्थ अब्जर्भेसन र ट्राफिक माेनिटरिङ स्याटेलाइट ‘लेमर टू टम हेन्डरसन’ हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । मोरङ र सुनसरीका केही ठाउँबाट मात्रै देखिएका कारण यो स्याटेलाइट नै हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नासोका अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार यस्ता स्याटेलाइट पृथ्वीको सहतभन्दा ४०० देखि ५०० किलोमिटरसम्मको उचाइमा रहन्छन् । यस प्रकारका स्याटेलाइटले पृथ्वीको कक्षमा एक चक्कर लगाउन ९४ मिनेट लगाउँछन् । प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा अमेरिकी स्याटेलाइट ‘लेमर टू टम हेन्डरसन’ नै हुन सक्ने भए पनि पूरा यकिनका साथ भन्न त्यसको सही ‘डिरेक्सन’ थाहा हुनु पर्ने भट्टराई बताउनुहुन्छ । मोरङबाट दिएको जानकारीअनुसार यो स्याटेलाइट उत्तर पश्चिम र पश्चिमको बीचतिरबाट निस्केर दक्षिण र दक्षिण पूर्व गएर हराएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा आइपुग्दा सबैभन्दा चम्किलो भएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।